Qoyskeyga waxaan uga sabri karaa ‘inuu soo islaamo ninkii weerarka fuliyay’ | Berberanews.com
Home WARARKA Qoyskeyga waxaan uga sabri karaa ‘inuu soo islaamo ninkii weerarka fuliyay’
Maryam Gul waxay weerarkii masaajidyada dalka New Zealand ku weysay guud ahaan qoyskeeda oo ka koobnaa walaalkeed, hooyadeed iyo Aabaheed.
Hase yeeshee waxay sheegtay iney cafisay ninkii toogashada geystay oo 50 ruux oo ay qoyskeeda ku jiraan ku laayay weerarkii dhacay maalintii Jimcada ee ay taariikhdu ku beegnayd 15-kii bishan Maarso.
BBC-da ayey uga warrantay iney xaalad xun gashay markii iyadoo ku sugan Pakistan ay maqashay in waalidkeed iyo walaalkeed ay ku geeriyiideen weerarkii argagaxa lahaa ee loo geystay muslimiin cibaadeysaneysa.
“Adduunka hadda waxaan ku dareemayaa in qoyskeygi oo idil ay iga dhinteen, laakiin waxaan ogahay in markii aadan heysanin qof inuu Alle wehel kuu yahay, balse inaan la’aantood noolaado waxay igu noqon doontaa arrin aad u adag, cid kale ma heysanin wuxuu ahaa walaalka kaliya ee ila dhashay, waalidiinteydiina way raaceen”, ayay tidhi Maryam.
Walaalkeed Zeeshan Gul wuxuu New Zealand u guuray 4 sano ka hor, markaasoo uu ka tagay dalka Pakistan.
Waalidiintiisa ayaa markii ugu horreysay ku booqanayay meesha uu joogo, balse waxaa ku soo beegmay weerarka.
Maryam ayaa sheegtay in ay rumeysan weysay dhacdada, maadaama ay sugeysay in hooyadeed iyo aabaheed ay Pakistan kusoo laabtaan bisha dambe.
“Aad baan u argagaxay, waxaan is dhahay maxay kulligood u wada dhinteen oo xitaa uu hal ruux uga badbaadi waayay, waxaan isku diyaarinayay inay ii soo laabtaan laakiin ma jirto cid ogeyd inaysan waligood soo laaban doonin”.
Ninka weerarka fuliyay ayaa Sabtidii ka soo hor muuqday maxkamad, isagoo lagu soo oogay dacwad la xiriirta dil.
Muxuu yahay mowqifkeeda ku aaddan ninka weerarka fuliyay?
Weerarkii Masaajidyada magaalada Christchurch waxaa loo maxkamadeynayaa nin u dhashay dalka Australia, kaasoo ra’iisul wasaaraha New Zealnd ay wacad ku martay in magaciisa aysan ku dhawaaqi doonin waligeed.
Hase eyeeshee, Mariyam waxay sheegtay in ay iska cafisay oo ay dooneyso inuu helo fursad uu uga shalaayo falkii uu geystay.
“Markii hore waxaan rabay in ciqaab aad u adag la marsiiyo, balse markii dambe waxaan soo xasuustay in sunnada nabigeenna Muxammad (csw) aysan sidaas ahayn. Wuxuu nabigeygu cafin jiray qofkii qaraabadiisa laayay”, ayey tidhi.
Iyadoo hadalkeeda sii wadata ayey intaas ku dartay: “Waxaan rabaa in ninka weerarka fuliyay uu soo muslimo, oo uu qaato diinta islaamka, ka dibna uu ka qoomameeyo wixii uu sameeyay uuna dhaho arrintaas waan ku khaldanaa, markaasna uu ogaado sida uu islaamku u qurux badan yahay”.
Previous articleEreteriya oo door ka qaadan doonta Wadahadallada Soomaaliya iyo Somaliland?
Next articleShirkii Golaha Wasiirrada Somaliland oo lagu Ansixiyey Siyaasadda Shaqaalaha